Fonosana voninkazo lohataona "Lohataona mamiratra" any Mosko - voninkazo manafatra
Kitapo voninkazo lohataona "Lohataona mamiratra"
35 sm 45 sm
Fanaterana ~ 3h., maimaim-poana any Moskoa
Hahavony 35 cm
48 hevitra momba ny asan'ny florist:
Olga Khasanova FANAHARAHANA URBAN 19-07-2021
Misaotra betsaka noho ny fandefasana faingana. Tena mety amin'ny orinasa ara-dalàna izy io, miforona avy hatrany ny kaonty. Manoro hevitra an'ity fivarotana an-tserasera ity aho.
Fehezam-boninkazo mahafinaritra ary serivisy tena haingana sy manampy! Izaho dia mandrisika!
Tena faly aho tamin'ny voninkazo tonga tamin'ny ampakariko izay faly tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany, manitra tsara ny voninkazo ary tena tsara tarehy izy ireo. Misaotra an'i.
Serivisy tonga lafatra! Tena araka ny nandidiako azy, maika dia haingana. Hampiasa indray aho! Misaotra anao !!
Milamina, haingana ary avo lenta ny zava-drehetra!
Adrien fahirano 17-02-2021
Serivisy tena tsara, tena matihanina ary mavitrika. tena atoro anao
Fanomezana mahafinaritra no hita. Voninkazo tsara tarehy sy endriny. Malemilemy sy tantaram-pitiavana. Misaotra anao indrindra. Ny zava-drehetra dia nentina tamin'ny fotoana voatondro.
Tena milay? Ary nanatitra ny zava-drehetra avy hatrany. Manomboka izao dia hanafatra aminao aho ...
Misaotra betsaka tamin'ny fehezam-boninkazo hafakely, mitovy amin'ny sary !!! Natahotra mafy aho ny amin'ny endrik'ilay fehezam-boninkazo amin'ny maraina (nanafatra fanaterana izy ireo tamin'ny 31 Aogositra), ny 1 septambra, fa very maina !!! Ny fehezam-boninkazo dia nijoro tsara tontolo alina, ny maraina - ny fahatsapana fa nandao fivarotana voninkazo izy ireo. Tsy misy fitarainana momba ny fandefasana koa. Misaotra an'izay nandray anjara tamin'ny fivoriambe sy fanaterana ny fehezam-boninkazo !!!
Harona misy voninkazo miloko malefaka: mavokely Peony - 17 pcs. Peony fotsy - 8 pcs. Rosia kirihitra nitsangana - 30 pcs. Bush nitsangana mavokely mavokely - 20 pcs. Kitapo Pistachio - 2 pcs. Harona - 1 pc.
26550 Voninkazo voninkazo "vita amin'ny landy"
Haronam-boninkazo hafakely: orkide cymbidium fotsy 5 pcs, leucospermum 3 pcs, craspedia 6 pcs, ambrella 1 pc, aspidistra 3 pcs, fonosana 1/2 3/XNUMX, voankazo manga XNUMX pcs.
7750 Harona misy voninkazo sy voankazo "Juicy mangatsiaka"
Harom-boninkazo miloko marevaka amin'ny raozy Ekoatoriana 15 pcs, lisianthus fotsy 10 pcs, gypsophila fotsy 10 pcs, orkide cymbidium fotsy 11 pcs, kininina 1 fonosana, fonosana 2 fonosana, freesia fotsy 10 pcs.
20100 Kitapo raozy sy orkide "Britney"
Fehezam-boninkazo tulips mavo 101 pcs amin'ny taratasy kraft mpamorona.
11150 Fehezam-boninkazo mavo tulips "volamena"
Fehezam-boninkazo raozy 21 misy loko Kenya 40cm amin'ny taratasy kraft.
2550 Fehezam-boninkazo rosia Kenya
Fehezam-boninkazo raozy: mavo 11, volomboasary 11, mena 11, salalà 1, fonosana 2/XNUMX.
4850 Fehezam-boninkazo raozy marobe "Heart"
Rindrambaza misy raozy famafazana 3 pcs, sampana spruce, kanelina 2 pcs, haingon-taona, ary koa tantely krama 3 pcs.
5750 Taom-baovao fitambarana "Cretaceous"
Fehezam-boninkazo lilia calla 15 maro loko amin'ny taratasy kraft.
5450 Fehezam-boninkazo lilia calla (lilia calla 15)